Prakash Khabar:: सहर उज्यालो पार्न हाइम्याकस वत्ति बाल्छौ Prakash Khabar
सहर उज्यालो पार्न हाइम्याकस वत्ति बाल्छौ
September 26, 2019 | 79 Views
प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका
बाहिरबाट हेर्दा सुस्ताएको देखिएको महानगर पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगर क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता काम गरिरहेका छन् । सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको काम कहाँ पुग्यो ? महानगरपालिकाको आगामी योजना के कस्ता रहेकाछन् ? किन महानगरले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकिरहको छैन ? यसका वाधक को रहेको छ । यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेका प्रकाश साप्ताहिकका बोधराज पौडेल र रामहरी चौलागाईंले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलसँग गरेको गरेको कुराकानी ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि भूकम्पबाट क्षति भएको काष्ठमण्डप निर्माणको काम थालनि भएको छ । त्यसै गरी स्वयम्भु, हनुमानढोका र वरपरिका विभिन्न मठ–मन्दिर निर्माणका कामहरु भइरहेको छ । त्यसै गरी अशोक विनायकको गुठीघर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हामीले सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्ने जात्रा, पर्व र गुठीका घरहरुको निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौ । यसमा केहीको काम सकिएको छ, केही सकिनेक्रममा रहेको छन् भने केहीको काम चलिरहेको छ ।
महानगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गामा कतै बृद्धाबृद्ध, कतै बालबालिका पार्क अनि कतै बगौचाहरु बनाउने काम पनि भइरहेको छ । रानीवारी, कमलपोखरी र मित्रपार्क जस्ता ठूला पार्कलाई हरियाली पार्कको रुपमा विकास गरिदैछ । यस्ता पार्कहरुले महानगरको शोभा बढाउँछन् । रानीपोखरीको अनुगमन मूल्याङ्नको काम गर्ने र त्यसको लगानी भने पुन निर्माण प्राधिकरणबाट हुनेछ । पहिला त हामीले नै बनाउने भन्ने थियो तर, कारणवश त्यसो हुन सकेन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरवासीलाई धेरै समस्या रहेको छ । राम्रो खालको सबै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको अभाव रहेको छ । त्यसमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले आइसियु सहितको एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेका छौ । त्यसमा ७० वर्ष भन्दा बढी उमेरमा बृद्धबृद्धालाई निशुल्क र अन्यलाई केही शुल्क लिएर यो सेवा दिइरहेका छौ । अहिले १० वटा एम्बुलेन्सले यो सेवा दिइरहेका छन् । यसको प्रयोग उपत्यका र आवश्यकताको आधारमा अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
विपत सम्बन्धी काम पनि हामीले गरिरहेका छौ । त्यसको लागि आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्था मिलाएका छौ । वडा कार्यालयलाई क्षमता र आवश्यकताको आधारमा दुईदेखि तीन करोडसम्म बजेट पठाइएको छ । टोल उज्यालो कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । यसमा महानगरलाई कसरी उज्यालो बनाउने भन्ने रहेको छ । अहिले १० हजार स्थानमा यो सेवा सुरु हुन गइरहेको छ । यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौ । हाइम्याक प्रविधियुक्त बत्तिहरुको जडान भइरहेको छ । यो वत्ति बलेपछि वत्तिको केन्द्रबाट पाँचसय मिटर वरपर उज्यालो देख्न सकिन्छ ।
टोल वस्तीमा हुने अवाञ्छिनीय घटनालाई रोक्नका लागि हामीले सिसिक्यामेरा पनि जडान गर्ने कार्य सुरु गरेका छौ । यो काम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीसँग हाम्रो साझेदारिता भइसकेको छ । वत्ति र सिसिक्यामेरा जडान भएपछि चोरी लगायतका अन्य घटना कमि गर्नमा यसले सघाउ पुर्याउने छ । धुलो मुक्त सहर निर्माण गर्ने परिकल्पना अनुसार ब्रुमर सेवा आएको छ । यो मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको कुरा नै हो ।
वडाले १४ करोड उठाएर महानगरलाई पठाउँछ, तर यहाँबाट त तीन करोडमात्र जादाँ वडाले कस्तो महशुस गरेका छन त ?
यो त वडाले आफ्नो आन्तरिक रुपमा गर्ने खर्चका लागि पठाइएको वजेट हो । वडामा अन्य पूर्वाधारका ठूला कामहरु यहाँबाट नै भइरहेका हुन्छन् । यहाँबाट गएको वजेट वा योजना पनि वडाकै भएको हुनाले यसलाई सतही रुपमा हेर्नुु हुँदैन । दीर्घकालिन योजनाहरु यहाँबाट संचालित हुने भएको हुनाले वडाले गुनासो गर्नु हुँदैन । किनभने हामी सबैको उद्देश्य भनेको विकास गर्ने नै हो । हामीले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने पहिले वडा हुँदा बढी आउने भनेको २४ लाख हो । अहिले तीन करोड जानु पनि पहिलेको तुलनामा नराम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कुनै वडाले त हामीले पठाएको रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता आएको अवस्था पनि छ । यसो हुनाले वडाको क्षमता र आवश्यक्ताको आधारमा रकम खर्च हुने हुँदा सबै वडालाई मिलाएर खर्च गर्ने वातावरण र सदुपयोगको काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो । हामी कसैमाथि अन्याय होस भन्ने कुरा सोच्दैनौ ।
महानगरले देखिने खालको कुनै काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लागेको छ, यसमा तपाईं धारणा के छ ?
हो, मेयरले कुनै न कुनै देखिने काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले पनि धेरै किसिमका कामहरु गरिरहेका छौ । तर, ठूलो काम गर्न सकिएको छैन । जनताको चाहना भनेको कुनै एउटा देखिने काम गरोस भन्ने हुन्छ त्यो स्वभावि पनि हो । जस्तो मण्डला, टुडिखेल चौडा जस्ता काम केशव स्थापितले गर्नु भएको थियो । हामीले तीनकुनेमा एउटा बुद्धपार्क बनाउने योजनामा लागि रहेका छौ । यो काम भएपछि धेरैलाई त्यहाँ घुम्न र आराम गर्नका लागि राम्रो हुनेछ । यो वातारणीय हिसाबले पनि राम्रो हुनेछ ।
वडाको सिफारिस र अन्य कर धेरै महंगो भएको गुनासो पनि आइरहेको छ, यस महानगर भित्र रहेका वडाको अवस्था भने कस्तो रहेको छ ?
पहिलाको तुलनामा केही बढेको मान्न सकिन्छ । तर, तपाईंहरुले भने जस्तो गरी धेरै कर लिएको छैन । हामी नयाँ संरचनामा जाँदाको अवस्थामा कर र अन्य कुरामा भएका फेरवदलले हामीलाई केही असहज वातावरण पक्कै बनाएको हामीले पनि महशुस गरेका छौ । तर, नयाँ कुरामा जाँदाको समयमा केही करका दायराहरु बढाउनु स्वभाविक पनि हो । यसको मुल कारण भनेको पहिला हामीले गोलमोडल रुपमा कर लिइरहेका थियौ । तर, अहिले हामी कामको वर्गीकरण गरेर काम गरिरहेका छौ । त्यसकारण उनीहरुलाई मार परेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । हामीले १५ हजारका ठाउँका २१ हजार भएको छ । अन्य शुल्कको कुरा गर्दा जन्म, मृत्यु, विवाहका लागि ३० दिनभित्रका लागि कुनै दस्तुर लाग्दैन । तर त्यसको समय सीमा सकिए पछि भने नियम अनुसारको दस्तुर लाग्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वर्षै देखिको समस्या बनेको फोहोर व्यवस्थापन किन समाधान हुन नसकेको होला ?
हामीले समाधानका प्रयासहरु गरिरहेका छौ । हाम्रो क्षेत्र भनेको ठूलो छ । यहाँ दैनिक रुपमा नै हजारौं मेट्रिकटन फोहोर निस्कन्छ । त्यसलाई ब्यवस्थापनका लागि हामीले लिएको सिसडोल क्षेत्र भरिसकेको छ । त्यहाँ हामीले दुखका साथ फोहोर राखी रहेका छौ । त्यसमा पनि वर्षाको समयमा माथी गाडि जाँदैन । तल नै राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । अब बञ्चरेडाँडामा सुरु भएपछि भने यो समस्या समाधान दीर्धकालिन रुपमा समाधान हुने छ । यसको काम सम्पन्न भएपछि त्यहाँ पचास साठी वर्षसम्म फोहोर राख्न सकिन्छ ।